Workingkpụrụ ọrụ nke cylindrical ikuku mmiri
Workingkpụrụ ọrụ nke centrifugal ikuku mmiri Yiri nke ikuku ikuku ikuku, ma a na - eme usoro mkpakọ ikuku site na ọtụtụ ndị na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ (ma ọ bụ ọtụtụ ọkwa nke） n'okpuru ọrụ nke ike centrifugal. Onye na - afụ ya nwere rotor na - agbagharị na oke ọsọ.) rotor na-eme ka ikuku na-aga ije na oke ọsọ. Ike ikuku na-eme ka ikuku na-asọba na nbata nke fan na eriri na-etinye ya na ọdịdị nke ihe ahụ. A na-emeju ikuku ọhụụ site na ịbanye n'etiti ụlọ ahụ .
Principlekpụrụ ọrụ nke otu ogbo dị elu na-agba ọsọ ọsọ bụ: injin site na ntụgharị ọsọ ọsọ dị elu iji chụpụ impeller, ikuku axial site na mbubata mgbe ịbanyechara ọsọ ọsọ na-agba ọsọ na-agba ọsọ na-agba ọsọ, wee banye n'ime mgbatị mgbasawanye oghere, mgbanwe ngbanwe nduzi na Mbelata, Mbelata mmetụta ga-abụ na elu na-agba adiana airflow na kinetic ume n'ime mgbali ike (nwere ike), na-eme ka onye ofufe na-ebupụ nrụgide kwụsiri ike.
Na usoro iwu na-ekwu okwu, usoro nrụgide nke nrụgide nke centrifugal ikuku mmiri bụ ogologo akara, ma n'ihi esemokwu esemokwu na ọnwụ ndị ọzọ n'ime onye ofufe ahụ, nrụgide n'ezie na usoro ihe eji eme ihe na-ebelata nwayọ na mmụba nke mmụba ahụ, yana usoro ntụgharị ike kwekọrọ centrifugal onye ofufena-ebili na mmụba nke usoro ahụ. Mgbe ofufe na-agba ọsọ na a mgbe nile ọsọ, na-arụ ọrụ mgbe nke na-akwado ga-akpali tinyere mgbali-eruba njirimara usoro. Isi ọrụ nke onye ofufe na-adabere ọ bụghị naanị na arụmọrụ nke ya, kamakwa na njirimara nke usoro ahụ. Mgbe nguzogide nke ọkpọkọ ọkpọkọ na-abawanye, usoro ịrụ ọrụ ọkpọkọ ga-aghọ nke dị elu.
Principlekpụrụ bụ isi nke onye ofufe ụkpụrụ bụ inweta ọnọdụ ọrụ achọrọ achọrọ site na ịgbanwe usoro arụmọrụ nke onye ofufe n'onwe ya ma ọ bụ usoro njirimara nke netwọk ọkpọkọ mpụga.Na-aga n'ihu mmepe nke sayensị na nkà na ụzụ, AC moto ọsọ iwu technology na ọtụtụ-eji. Site na ọgbọ ọhụụ nke ihe elektrọniks na-achịkwa nke ọma, enwere ike ịchịkwa usoro nke ofufe site na ịgbanwe ọsọ nke AC moto na ntụgharị ntụgharị, nke nwere ike belata oke ike ike nke usoro igwe gara aga nke njikwa usoro.
Uzo izoputa ike nke usoro ntughari uzo:
Mgbe ọ dị mkpa ka a belata olu ikuku site na Q1 ruo Q2, ọ bụrụ na a nakweere usoro iwu nke ntụgharị, ebe ọrụ na-agbanwe site na A ruo B, nrụgide ikuku na-abawanye na H2, na ike aro P2 na-ebelata, ma ọ bụghị nke ukwuu. Ọ bụrụ na anakwere usoro ntụgharị ugboro ole, isi ọrụ nke onye ofufe ahụ sitere na A ruo C. Enwere ike ịhụ na n'okpuru ọnọdụ na otu ikuku ikuku Q2 nwere afọ ojuju, ikuku ikuku H3 ga-ebelata nke ukwuu ma belata ike ahụ
P3 belatara nke ukwuu. Efuola ike △ P = △ Hq2 bụ nke kwekọrọ na mpaghara BH2H3c. Site na nyocha a dị n'elu, anyị nwere ike ịmata na usoro ntụgharị ntụgharị ugboro ugboro bụ ụzọ dị mma maka usoro nchịkwa. Onye na-afụ ụfụ na-agbaso usoro ntugharị ugboro ugboro, agaghị ewepụta mgbakwụnye nrụgide ọzọ, mmetụta nchekwa ike dị ịtụnanya, gbanwee oke ikuku nke 0% ~ ~ ~ 100%, dabara maka usoro dị iche iche, yana mgbe n'okpuru obere ọrụ ọrụ oge. Otú ọ dị, mgbe ọsọ nke fan na-ebelata na olu ikuku na-ebelata, nrụgide ikuku ga-agbanwe nke ukwuu. Iwu nke onye ofufe ha bụ: Q1 / Q2 = (N1 / N2), H1 / H2 = (N1 / N2) 2, P1 / P2 = (N1 / N2) 3
Enwere ike ịhụ na mgbe ọsọ gbadara ruo ọkara nke ọsọ ahaziri akara nke mbu, ọnụọgụ agba, ike na ike nke ọnọdụ ọnọdụ ọrụ kwekọrọ na-adaba na 1/2, 1/4 na 1/8 nke mbụ, nke bụ ihe kpatara usoro ntụgharị ugboro ugboro nwere ike ịchekwa ọkụ eletrik. Dịka ụkpụrụ nke usoro ntụgharị ugboro ole, na usoro ọgwụgwọ nsị, tankị aeration na-edobekarị mmiri mmiri dị 5m, achọrọ onye na-afụ ụfụ ka ọ na-eduzi usoro dịgasị iche iche na-asọpụta n'okpuru ọnọdụ nrụgide ọpụpụ mgbe niile. Mgbe omimi nhazigharị dị ukwuu, ikuku ikuku ga-adaba nke ukwuu, nke na-enweghị ike izute usoro a chọrọ. Mgbe omimi nhazigharị dị obere, ọ nweghị ike igosi uru nke ịchekwa ike, mana mee ka ngwaọrụ ahụ dị mgbagwoju anya, itinye ego n'otu oge mụbara. Yabụ, n'okpuru ọnọdụ na ikuku ikuku nke ọrụ a kwesịrị idobe ogo mmiri nke 5m, o doro anya na ekwesighi itinye usoro mgbanwe ntụgharị ugboro ugboro.
Ejiri mpempe akwụkwọ ntuziaka na ntanetị na-eduzi usoro ntinye n'akụkụ ikuku nke ọkpọ ọkụ. Ọrụ ya bụ ime ka ikuku na-agbagharị tupu ịbanye na impeller, na-eme ka ịgbagọ ọsọ. Enwere ike ịtụgharị agụba gburugburu gburugburu ya. Ntughari uzo obula nke ube putara ngbanwe nke uzo uzo ndu, nke mere na uzo ikuku na-abanye n'ime ihe na-akwado ya na-agbanwe dika o kwesiri.
Mgbe ntuziaka agụba ụzọ akụkụ 0 = 0 Celsius, agụba ndu adịghị enwe mmetụta ọ bụla na ntinye ikuku, ikuku ikuku ahụ ga-abanye n'ime agụba ọkụ na ụzọ radial. Mgbe 0 BBB 0 Celsius, ntinye ụzọ nduzi ga-eme ka ọsọ ọsọ zuru oke nke ikuku na-agbagọ О Angle tinyere ntụzigharị ọsọ ọsọ, ma n'otu oge ahụ, ọ nwere mmetụta ntụgharị ụfọdụ na ọsọ nke ikuku ikuku. Ntugharị a na nsụgharị ga-eduga na nkwụsị nke usoro arụmọrụ na-akwado ya, iji gbanwee ọnọdụ ọrụ, ma ghọta usoro ofufe ofufe. Uzo izoputa usoro nke ndu uzo ndu.
Tụnyere nke usoro dị iche iche nke ụkpụrụ
Agbanyeghị ngbanwe mgbanwe ntụgharị nke ikuku mgbanwe ikuku ikuku dị obosara sara mbara, nwere mmetụta dị ukwuu na nchekwa nchekwa, mana yana sistemụ usoro anaghị ejedebe site na ọnọdụ usoro, usoro mgbanwe ahụ bụ naanị 80% ~ 100%, ọnụọgụ agba ọsọ gbanwere obere, usoro ngbanwe mgbanwe oge na ntuziaka vane abụọ ike ọkụ dị iche abụghị nnukwu, yabụ ọnọdụ njikwa ntụgharị, ike ịchekwa ike pụrụ iche apụtaghị, ọ tụfuru nhọrọ nhọrọ ya. Onye na-egbu ihe na usoro nduzi usoro nduzi nwere ike idozi olu ikuku (50% ~ 100%) n'ọtụtụ buru ibu n'okpuru ọnọdụ nke idobe nrụgide nkwụsị mgbe niile, iji hụ na ọdịnaya nke ikuku oxygen gbawara na nsị ma chekwaa ume dịtụ. Ya mere, a ga - ahọrọ onye na - agba ikuku na - agba ọsọ ọsọ nke nwere usoro idozi ụzọ dị ka nhọrọ akụrụngwa na ọrụ a. N'otu oge ahụ, iji gosipụta mmetụta nchekwa ike ka mma, maka ike ikuku ikuku dị elu, ekwesịrị ịkwụ ụgwọ maka ịhọrọ igwe na-akwado ya, dịka iji igwe eletrik 10kV dị elu, na-enye aka belata ike oriri .